GarsoorNews - GABLANTADA Soomaali: kan GUMAADA ayey u GURBAAN garaacdaa!
by Farah C/laahi | Wednesday, Sep 13, 2017 | 267 views
Bashiir M. Xersi (GarsoorNews) — Xaaladda la soo gudboonatay Xasan Daahir Aways qofba dhan iska taag. Mid QABIILku ayida iyo mid aragtida gurracan “DIIN DACAREED” ee uu aaminsan yahay ku raaca.
Qodobkan iyo inta sare ku xusay ayaa ah sababta aan qormadan kooban u qorayo, illeen dadku waa wada indha ku garaadlee, hadduusan ahaynna wuusan isu jeedin. Maxaa yeelay, isma oga inuu kala hadlayo, oo marna leeyahay ARGAGIXISANIMADUwaa wax XUN, marna uu leeyahay waa wax wanaagsan!
3 Bil Kadib, Maxaa Ka Qabsoomay Ballantii Farmaajo?
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajowaxaa uu 4-tii June ee sanadkan, Garoonka Koonis ka ballan-qaaday in uu 3 bil gudahood wax...
Bashiir M. Xersi (GarsoorNews) — “HILAADIN”, oo ah dhigane aan qoray, daabiddiisuna socoto, dhawaanna soo bixidoona, ayaa waxaa jira halbeeg la yiraa: “WADAAD MA...
Bariga Dhexe balaayada ka soo socota ma ahan wax go’aan deg deg ah laga gaari karo. Carabi ehel uma ahan Soomaalida, haddana waa dad aan wadaagno diin iyo dhaqan. Anigu...
Waxaan halkaan idinkugu soo gudbinayaa maqaal aan ugu talo galay inaan ku iftiimiyo qayb kamid ah qaladaadka joogtada ah ee qaar kamid ah Madaxda Qaranku ka galayaan Dalkii...